Microsoft Visual Studio dị ugbu a maka Mac na nsụgharị ikpeazụ ya Esi m mac
N’ọnwa Nọvemba gara aga, Microsoft wepụtara usoro nlele mbụ nke Visual Studio, ngwa nke ga-enye ndị ọrụ niile ohere ịmepụta ngwa maka macOS, iOS, tvOS, watchOS na gam akporo yana ngwa dị n’igwe ojii na web. N'ụzọ dị otú a, anyị zeere iji Windows PC iji jiri ihe mmemme a, mepụta igwe mebere ma ọ bụ wụnye ya na Mac. Ọnwa isii ka mbido nke mbụ na naanị beta nke Microsoft malitere, ụmụ nwoke Redmond mara ọkwa na Versiondị ikpeazụ nke Microsoft Visual Studio maka Mac dị ugbu a.
Ngwa a na-enye ohere leverage technology Microsoft nwetara site na Xamarin iji kwado mmepe C # maka iOS, macOS, Windows na gam akporo, gụnyere ịnweta igwe ojii Xamarin na ọrụ ntanetịime, Azure na .NET Core ngwa dabara. Ọzọkwa ndị ọrụ nwere ike itinye ngwungwu NuGet yana akụrụngwa nke ndị ọzọ dị ka Git. Njirimara ndị ọzọ gụnyere nchọta zuru ụwa ọnụ maka faịlụ, iwu, ụdị ...
Microsoft Visual Studio dị naanị maka Windows, ụzọ iji debe ndị mmemme na ikpo okwu, mana nwa oge ugbu a chọrọ mụbaa ojiji nke gị ngwa na ngwaọrụ na mwepụta nke Anya Studio maka Mac bụ ihe akaebe na nke ahụ. Guysmụ okorobịa nọ na Redmond chọrọ ịdị na mbara igwe niile ma nwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ha niile na ntanetị ma ọ bụ desktọọpụ n'ahịa.
Microsoft jikwa afọ ole na ole rụpụta ngwaọrụ nke ya, n'okpuru akara Mkpa, ụfọdụ ngwaọrụ ndị nwere oke ọganiihu ha n'ahịa ahụ, ọkachasị oke Surface Pro, ngwaọrụ aghọọla ezigbo ewu ewu n'etiti ndị ọrụ chọrọ mbadamba na laptọọpụ niile, maka eziokwu ahụ na enwere ike iwepụ keyboard na ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Microsoft Visual Studio dị ugbu a maka Mac na nsụgharị ikpeazụ ya
Ihe nkwụnye maka iMac na ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 na onye na-agụ kaadị